Amagumbi imizuzu engama-35 ukusuka eTolantongo Grottoes
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguSamuel
Kukho amagumbi ama-2 anokuthi ahlalise ukuya kuthi ga kwi-6 abantu, Ibekwe kwisikwere esikhulu sedolophu entle yaseCardonal, eHidalgo kwaye ngaphakathi kwepropathi ekhethekileyo yokuhlala. Inendawo yokupaka enkulu yangaphakathi egqunyiweyo, i-intanethi, amanzi ashushu, i-smart tv ene-netflix kunye neAmazon.
Kwimizuzu nje engama-35 ukuya kwiiTolantongo Grottoes, banokungena bengenazitshixo nangaliphi na ixesha nezitshixo ze-elektroniki. Kukho iiteksi, irestyu, iplaza yempelaveki, cashier, amapolisa nokunye
Ziyi 2 room enye isecaleni kwelinye, enye inocango nehalf bath yayo, I shower yodwa kodwa isecaleni kwamagumbi ayibiwa namntu. Kwigumbi eliphangaleleyo kukho igumbi lokutyela, ifriji, iTV, umenzi wekofu, i-oveni, kunye nezitya.
Kukho nebhedi yesofa.
Ndifumaneka ixesha elininzi kwaye ndizama ukuphendula ngokukhawuleza, ngokukhetha ngoWhatsApp.